> Resource> Naghachi> Top 10 Cell Phone Data Recovery Software
A bụ ndepụta nke ụfọdụ ndị software họọrọ kasị mma mgbe ọ na-abịa data mgbake si igwe.
Sistem: Windows 98/2000/2003 / XP / Windows 7/8, Vista
Otu nke na-eduga software bara uru na mgbake nke foto na ihe oyiyi si igwe na ebe nchekwa kaadị eji na igwefoto dijitalụ. Ike nke CardRecovery emeela ya aha dị ka otu n'ime
• The kacha mma ekwentị data mgbake software nke na-eji mweghachi nke ehichapụ foto site na ebe nchekwa kaadị eji na dijitalụ ese foto na ekwentị.
• Ọ dị nchebe ma free nke ize ndụ ebe ọ rụrụ na-agụ -only aga-eme nke ime ka ọ dịghị mmetụta ọjọọ na kaadị ebe nchekwa.
• Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke na ebe nchekwa kaadị gụnyere xd Foto dị Kaadị na SD Kaadị n'etiti ndị ọzọ.
• Weghachi data site na rụrụ arụ SD kaadị
• Full Edition bụ ọnụ
Na-arụ ọrụ ọbụna na kemgwucha ebibi foto na vidiyo faịlụ echekwara na ebe nchekwa ruo, MMC, Micro mbanye na CF kaadị. PhotoRec bụ software-eji na ekwentị data mgbake na ọ na-agbala n'okpuru GPLV v2 +.
• Ọ na-eweghachi ehichapụ vidiyo ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ nke faịlụ site na ekwentị gị ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa
• Ọ na-ebelata n'ihu mmebi ma ọ bụ ọnwụ nke data site na iji na-agụ-nanị mgbake ngwá ọrụ
• arụ ọrụ nke ọma ọbụna idiọk mebiri emebi ma ọ bụ formatted faịlụ usoro
Naghachi My Files
Sistem: Ọ dịghị chọrọ
Ọ simplifies data mgbake usoro gụnyere foto, image faịlụ site na ike draịva, dijitalụ ese foto na ozi ịntanetị. I nwekwara ike dozie maka Naghachi My Files nke nwekwara e pụtara na
• Ọ simplifies ọrụ nke ekwentị mgbake na mmekọrita faịlụ inweta site a ekwentị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ multimedia ngwaọrụ.
• Fast, mfe iji na-adịghị achọ ihe ọ bụla na ụzụ nkà
Sistem: Windows 8/7/2008 / Vista / XP / 2003
Ọ bụ iji weghachi ehichapụ Gburu si egweri biini, windows kọmputa, dijitalụ igwefoto na MP 3 ọkpụkpọ. Recuva bụ free software eji maka data mgbake na igwe.
• Nke a bụ otu n'ime ekwentị mkpanaaka data mgbake software dị njikere dị na nnọọ ọ na-eri.
• Ọ nwekwara ike na-arụ otu ọrụ na Windows Computer, MP3 ọkpụkpọ nakwa dị ka a dijitalụ igwefoto.
Sistem: Windows 7/8 / Vista / XP / 2003/2008, Mac OS
Ọ nwere ike na-aghọta na weghachite ruo 300 faịlụ nke dị iche iche signatures nakwa dị ka video na music faịlụ. Ọnwụ ha na-akpọ maka ojiji nke a ọkaibe ekwentị mgbake pụtara dị ka ojiji nke Remo Naghachi software. Formatting na portioning nwere ike n'ụzọ dị mfe ịkpata ihichapụ nke dị mkpa faịlụ. s
• Nke a software na-akwado ike draịva si dị iche iche na-emepụta dị ka Fujitsu na Apple n'etiti ndị ọzọ.
• Ya wuru na algọridim-enye ohere ọ naghachi ruo 300 faịlụ na ha niile dị iche iche signatures.
• Ezi ahịa nkwado
• Naghachi niile ụdị data
• Họrọ nri version nke ọ bụla kpọmkwem ọnọdụ
Get Remo Naghachi
Sistem: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7/2003 ma ọ bụ 2008 Server
Smart ntị, ese foto, Ike draịva, ebe nchekwa kaadị bụ ụfọdụ n'ime nchekwa ọnọdụ na nke a software nwere ike iweghachi faịlụ site na. Faịlụ na nchekwa nwere ike-ehichapụ na usoro nke iji gị smart ekwentị. Undelete 360 bụ software iji n'ihi na mgbake nke ndị dị otú ahụ data. Ọ bụ a na-atụ aro ụdị mobile data mgbake n'ihi
• Ọ na-eji oge a na algọridim nke gbapụrụ ọsọ data mgbake usoro si kaadị ebe nchekwa gị.
• Ọ na-akwado mgbake nke ma faịlụ na nchekwa gụnyere ndị na site gafere egweri biini ruru ha size .
Sistem: Windows 8/7 / Vista / 2000 / XP
Nke a bụ a na-agbanwe software na wastes oge mweghachi nke video na ọdịyo faịlụ site gị niile multimedia. Na-ewere foto na iji ekwentị mkpanaaka bụ a nkịtị ọrụ ma weghaara oge nwere ike furu efu mmadụ na mberede. Jiri Wondershare Photo Recovery nke bụ otu n'ime ndị kasị mma software kwalitere n'ihi na ekwentị mkpanaaka mgbake.
• Ụdị nile nke ọdịyo na visual data furu efu nwere ike weghachiri eweghachi ha mbụ ọnọdụ
• Ọ bụ eri irè ma dị mfe iji.
• Naghachi photos na ụfọdụ videos
• adịghị akwado FLV format
Sistem: Windows 8.1 / 8/7 / Vista / 2000 / XP
The irè software iji na mgbake nke ehichapụ Gburu, photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ. Ọ dị mfe iji na-achọ ọ tupu nkà. Wondershare Data Recovery Bụ onye ọrụ-enyi na enyi na-adịghị achọ ka ọ bụla tupu nkà n'ihi na ọ na-eji.
• Nke a mobile data mgbake software nwere ikike iji weghachi ihe karịrị 500 dị iche iche formats nke faịlụ gụnyere ndị na-adị na ekwentị gị.
• Ọ nwere ike iweghachi ihe ọ bụla faịlụ site ozi ịntanetị, photos, videos na ndị ọzọ.
Sistem: Windows 8.1 / 8/7 / Vista / XP
Ọ nwere mfe iji interface na o kwere ka a onye ọrụ na-agbake kọntaktị, foto na ozi site na Android igwe. Kama iji azụ elu gị nwere ike ịgakwuru Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) nke irè weghachiri furu efu faịlụ n'ime kasị nso oge o kwere omume.
• Ọ bụ dakọtara na ọtụtụ nsụgharị nke gam akporo igwe, HTC na LG-eme ka ọ otu nke kasị mma na ekwentị mkpanaaka data mgbake software.
• nwere ike naputa ehichapụ ozi na kọntaktị.
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọtụtụ igwe ika.
• Fast mgbake na ike naputa ọtụtụ nke ọdịnaya.
• Ụfọdụ okenye na nsụgharị ndị dakọtara na ọhụrụ android nsụgharị.
Naghachi gị data si iTunes ndabere faịlụ na ozugbo gị iPhone, iPad na iPod aka site na iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) nke bụ ike nke na-eweghachiri data si kụrisịa ma ọ bụ agbajikwa igwe enweghị na-eme n'ihu ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke faịlụ.
• Naghachi data ọ bụla i0S n'elu ikpo okwu
• Naghachi data na rụrụ arụ SD kaadị
• Ọ ghara-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị okenye iPod nsụgharị